musha NFL Vatambi Bio VaPatrick Mahomes Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Facts
Kutanga kuenda, ane zita rezita "Pattycakes".
Yedu Biography yaPatrick Mahomes inokuudza Nyaya yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga, Chokwadi cheMhuri, Vabereki uye nezvaBrittany Matthews - mudiwa wake.
Zvikuru, iyo NFL nyeredzi Hupenyu hweMunhu, Mararamiro uye zvimwe zviitiko zvinozivikanwa kubva paakanga ari mudiki kusvika pakuzivikanwa.
Patrick Mahomes - Tarisa Hupenyu hwake hwepakutanga uye Kukura Kukura.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe weakanakisa quarterbacks muNFL. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Patrick Mahomes 'Biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Patrick Mahomes Yehucheche Nyaya:
Kutanga, Patrick Lavon Mahomes II aive pazuva 17th raSeptember 1995 paTyler kuTexas, USA Aive wekutanga pavana vatatu akazvarwa kuna mai vake Randi Martin (aimbova baseball baseball) uye kuna baba vake Pat Mahomes.
Uyu ndiPatrick Mahomes mudiki muHudiki hwake.
Waizviziva here kuti Patrick ndeweAmerica wedzinza rakasanganiswa nemidzi yeAfro-America?… Patrick akanakidzwa nemakore ekutanga achikura kuWhitehouse muTexas pamwe nevanin'ina vake - Jackson (mukoma) naMia (Hanzvadzi).
Kukura kuWhitehouse, Patrick aive mwana wemitambo aive akaiswa mari zvakanyanya mumitambo. Kupesana nekutenda kwakapararira, mutambo wekutanga waPatrick wehudiki waisave nhabvu asi baseball!
Vakanga vari baba vaPatrick - Pat avo vakamuzivisa iye kumutambo asati atombogona kudzidza kufamba. Ivo baba vane hanya vakaenderera mberi nekudzidzisa mudiki Patrick mu baseball pamusoro pemakore akatevera.
Kutenda tarenda rake rechisikigo remutambo, vabereki vaPatrick Mahomes vakava netariro yakakura yekuti aizoita basa kunze kwebaseball. Kutenda uku kwakatanga apo Pat mudiki aive mucheche mudiki.
Patrick Mahomes Mhuri Yemhuri uye Akatangira:
Nekuremekedza madzitateguru avo, vabereki vaPatrick Mahomes zvechokwadi vane chinhu chekusiyana.
Waizviziva here?... Baba vake muAfrica muAmerica nepo amai vake vari mukadzi wechiCaucasian weChirungu, chiGerman, chiScottish chirikure, uye chiDutch.
Nekudaro, hazvishamise kuti vabereki vaPatrick Mahome vakamupa 'mwenje yegirinhi' kuti aongorore mumhanyi wake mukutamba nhabvu nebasketball.
Kutenda kwavari, Patrick aive nemhuri yemhando yepamusoro uye haana kumboshaya zviwanikwa zvekumubatsira kuzadzisa zviroto zvake zvehudiki.
Patrick Mahomes dzidzo:
Patrick akaenda kuWhitehouse High School muWhitehouse, Texas. Paaive kuWhitehouse High, Patrick akasanganisa dzidzo yake yakajairika nekuve mitambo mitatu (baseball, basketball, uye nhabvu) mutambi.
Pamusoro pechikoro chake chesekondari, Patrick aive akasarudzika mu baseball nenhabvu. Muchokwadi, aive pane radar yemazhinji epamusoro-chikamu Major League Baseball (MLB) zvikwata.
Akatosarudzwa ne'Detroit Tigers 'panguva yegore ra2014 MLB dhizaini apo Texas Tech koreji yakauya ichimupa kudzidza kuti atambe nhabvu.
Patrick Mahomes Makore Ekutanga neBhora:
Kunyangwe nhabvu ne baseball prodigy vaifarira kutamba mitambo yese, anosarudza kubvuma kudzidza kweTexas Tech yekutamba nhabvu yekoreji uye akafamba zvakanaka mumutambo.
Panguva ipi neipi apo Patrick aisave munhandare yenhabvu panguva yemitambo, aigona kuwanikwa achitamba baseball sechirongo cheyero chevadzidzi vake vekoreji vanoziva se'The Texas Tech Red Raiders. '
Patrick Mahomes Biography - Rwendo rweMukurumbira:
Panguva yakaitwa naPatrick negore rake rekupedzisira, akaita sarudzo yekusiya baseball. Kunyangwe baba vaPatrick vangadai vakasarudza kumuita kuti atarise pane baseball, anga asina sarudzo kunze kwekutsigira danho remwanakomana wake.
Achitsigirwa nerutsigiro rwemubereki wake, Patrick akaenderera mberi nekutanga mwaka we2016/2017 akatarisana nenhabvu.
Pakupera kwemwaka, akaisa zvinyorwa zvakawanda zvinosanganisira kuhwina 'Sammy Baugh Trophy' uye kuva mu'Academic All-American 2nd Team.'
Patrick Mahomes Biography - Iyo Yakabudirira Nyaya:
Kunze kwegore gare gare, Patrick akapinda mu2017 'NFL Draft' semumwe wevatambi vakatsvakwa zvakanyanya. Akasarudzwa ne'Kansas City Chiefs 'muround rekutanga renyorwa uye akapedza mwaka wake we rookie semubhadharo kuna Alex Smith.
Apo Alex Smith akatengeswa kuWashington Redskins mwaka unotevera (2018/2019), Patrick akatumidzwa zita rekutanga quarterback.
Patrick akafadza mwaka iwoyo nekukanda 5,097 mayadhi, achiita makumi mashanu touchdowns uye kuunganidza gumi nembiri.
Nerekodhi, Patrick akave ega quarterback munhoroondo kukanda kweanopfuura zviuru zvishanu pamayadhi mukoreji uye NFL kwemwaka!
Akaenderera mberi nekutungamira ivo Cheifs kune yavo yekutanga Super Bowl kutaridzika panguva ye2019 / 2020 playoffs pamwe yakavabatsira kuchengetedza yavo yekutanga Super Bowl kukunda kubvira 1970.
Ndiani Patrick Mahomes Musikana?
Achienderera kuhupenyu hwerudo hwaPatrick Mahome, anga ari muhukama hwakareba-refu nemusikana wake Brittany Matthews. Shiri dzerudo dzese dzakakurira kuWhitehouse muTexas.
Vakasangana muchikoro chesekondari uye vakatanga kufambidzana panguva apo Patrick aive sophomore uye Brittany ari junior.
Brittany naPatrick vanga vari pamwe chete kubva ipapo, budiriro inotsanangura kuti nei nyanzvi yenhabvu isingazivikanwe kuve neimwe vasikana.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Brittany zvakare anofarira zvemitambo. Aimbove mutambi wenhabvu wekoreji paYunivhesiti yeTexas iri muTyler uye akatamba nhabvu yehunyanzvi yeUMF Afturelding / Fram muIceland.
Ari panguva yekunyora, mudzidzisi wega wega anotengesa zvirongwa zvekurovedza muviri. Patrick naBrittany havasi kukurumidza kuva murume nemukadzi.
Uyewo havana mwanakomana (vana) nemwanasikana (va) kunze kwemuchato. Nekudaro, ivo vane imbwa mbiri dzakanaka dzinonzi simbi nesirivha.
Patrick akafananidzirwa padivi peBrittany nembwa dzavo- Hazvina kunaka pamwechete here?
Patrick Mahomes Hupenyu Hwemhuri:
Mhuri haina kukosha chete kunaPatrick Mahomes. Izvo zvinhu zvese kune quarterback. Muchikamu chino, tinokuunzira zvimwe zvakawanda nezve nhengo dzemhuri yaPatrick Mahome kutanga nevabereki vake.
Nezve Patrick Mahomes Baba:
Pat Mahomes ndiye anotsigira baba wekotaback. Aive nyanzvi baseball uyo akatamba muMLB semudziyo kwemakumi gumi emakore. Saka nekudaro, Patrick akakura achiona baba vake vemuAfrica -America vachitamba mutambo uyu.
Ehe, Pat aive netariro dzakakwirira dzekuti mwanakomana wake aizotevera tsoka dzake nekuve nyanzvi baseball mutambi. Nekudaro, akasara asina sarudzo asi kutsigira sarudzo yake yekuve mutambi wenhabvu. Pat anodada nezvakave mwanakomana wake uye anoramba achimutsigira.
Nezve Patrick Mahomes Amai:
Randi Martin ndiye amai vekota yekudzoka. Amai veCaucasian vevatatu vakarambana nababa vaPatrick mwana wekota asati ave kuyaruka.
Zvakangodaro, akaramba ari padyo nevana vake uye achishanda nemurume wake kuona kuti Patrick awana dzidzo yekoreji nekuti iye kana Pat havana kuenda kukoreji. Randi ndiye mukuru anonyanya kufadza Patrick uyo anovimbisa kuti haambopotsa chero yemitambo yake.
Nezve hama dzaPatrick Mahomes:
Iyo quarterback ine vaviri vakanaka vanun'una. Ivo vanosanganisira munin'ina wake Jackson pamwe nehanzvadzi yake diki Mia. Jackson ndiye akareba kupfuura vese mumhuri. Akatamba basketball kuchikoro chesekondari uye ane tarisiro yekuve mutambi wehunyanzvi.
Kune iye chikamu, kwete zvakawanda zvinozivikanwa nezve hanzvadzi yaPatrick Mia uyo akanaka kwazvo pazera panguva yekunyora iyi biography.
Taura nezve hwakawedzera hupenyu hwemhuri hwaPatrick Mahome. Vanasekuru vake baba vaJohnnie / Johnny Wayne Mahomes naBetty Lucindyne / Lucendyne Norman.
Padivi reripi, sekuru vaamai vaPatrick naambuya vake vaive Larry Randy Martin naDeborah Pearl Bates zvakateerana.
Isu tinoziva zvishoma nezve babamunini, vanatete, uye babamunini vequarterback iye asina muzukuru kana muzukuru panguva yekunyora iyi biography.
Patrick Mahomes Hupenyu hweMunhu:
Patrick Mahomes ane hunhu hunodakadza hune hunhu hweVirgo Zodiac chiratidzo chiratidzo. Iye akasarudzika, anosetsa, ane rupo, ane hunyanzvi, anofarira, ane fungidziro, uye akavhurika kuzarura chokwadi nezve hupenyu hwake hwega uye hwepamoyo.
Zvido zvekotabackback uye zvekuvaraidza zvinosanganisira kufamba, Kuchengeta baseball uye basketball mitambo, kutamba gorofu, kuteerera mimhanzi, uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Patrick Mahomes Mararamiro:
Nezve mashandisiro anoita Patrick Mahomes uye kushandisa mari yake, ane mari inofungidzirwa kuti inosvika $ 12M panguva yekunyora iyi Bio.
Huzhinji hwepfuma yekotaback ine masosi akagadzwa mumihoro uye mibairo iyo yaanogamuchira yekutamba nhabvu nepo kubvumidzwa kuchipa chakakosha chunk kuhupfumi hwake hunowedzera.
Nekudaro, iyo quarterback inokwanisa kurarama hupenyu hwoumbozha uhwo vateveri vanomuitira godo. Humbowo hwehupenyu hwakanaka hwaPatrick Mahome hunosanganisira kugona kwake kutyaira nekuchengetedza mota dzinodhura.
Chii chimwe? anogara nemusikana wake mumba ma $ 1.925 muKansas City kuMission Hills.
Patrick Mahomes Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Patrick Mahomes yehucheche nyaya uye biography pano pane zvishoma-zvinozivikanwa kana zvisina kutaurwa chokwadi nezve iyo quarterback.
Chokwadi # 1 Kusvuta uye Kunwa Chokwadi:
Patrick Mahomes anonwa nekuremekedza uye haaputi panguva yekunyora. Nemaitiro akadaro ane hutano, quarterback inobatana nemutambo wevatambi venhabvu vasina kurasa kukosha kwekugara uye kugara vakagwinya.
Chokwadi # 2- Chitendero Chokwadi:
Vabereki vaPatrick Mahomes vakamurera maererano nekutenda kwechitendero chechiKristu. Amai vekotabackback vakaratidza kuti vakawana rutendo rwake kuchikoro chepakati.
Ndichiri pachikoro chepakati chisina kutaurwa nezita Patrick anonzi akabatana neboka revechidiki rakabatsira kusimudzira kutenda kwake. Iwe unoziva here kuti quarterback inonamata pamberi pemitambo yake?
Chokwadi # 3 Tattoos Chokwadi:
Patrick Mahomes haana tattoo panguva yekunyora asi mafeni ane ma tattoos ake. Nekudaro, hapana kutonga kunze kwekuti angadai nekukurumidza akawana hunyanzvi hwemuviri kupedzisa kukwirira kwake kwemamita matanhatu nemasendimita matatu.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Patrick Mahomes Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Patrick Mahomes 'Biography Chokwadi (Wiki Anobvunza)
Zita rizere: Patrick Lavon Mahomes II
Zita rekudanwa: Pattycakes
Vabereki: Randi Martin (Amai vaPatrick Mahomes 'Amai) naPat Mahomes (baba vaPatrick Mahomes)
Vanun'una: Jackson Mahomes (munun'una) uye Mia (hanzvadzi diki)
Patenal Sekuru: Johnnie / Johnny Wayne Mahomes naBetty Lucindyne / Lucendyne Norman
Vanasekuru Vanasekuru: Larry Randy Martin naDeborah Pearl Bates.
Zodiac Chiratidzo: Virgo
Hupenyu hweMunhu hunhu: Kuvimbika, kuongorora, mutsa, kushanda nesimba uye kuita.
Mhuri Kubva: African American
kukwirira: 6 ft 3 mu (1.91 m)
Basa: American nhabvu mutambi (Quarterback)